यहाँ आफ्नै बुबासँग हुन्छ विवाह, सानै उमेरमा युवतीलाई देखाईन्छ यस्तो सपना! -बिगुल न्यूज
एजेन्सी, संसारभरि विवाहसँग जोडिएको अनेक परम्परा प्रचलित रहेको छ । तर जुन परम्पराको आज हामी कुरा गर्दै छौ त्यसको बारेमा भने सायद धरैलाई थाहा छैन होला । यस परम्परालाइ लिएर तपाईलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर यो सत्य हो । यो परम्परामा छोरीको विवाह आफ्नै बाबुसँग हुने गर्दछ । साथै सानैदेखि तिम्रो विवाह तिम्रो बुबासँग हुन्छ भनेर उनीहरुलाई अनेक सपना देखाउने गरिन्छ। जसले गर्दा उनीहरुले पनि मन-मनैबाट मेरो हुनेवाला पति मेरै बुबा हुन् भनेर स्वीकार गर्ने गर्दछन् ।
यो परम्परा अरु कुनै देशमा नभईकन बंगलादेशमा प्रचलित रहेको छ । बंगलादेशको मन्डी जनजातीमा यो कुप्रथा प्रचलित रहेको छ । सुरुवात देखि नै यस जातिमा पिताको विवाह आफ्नै छोरीसँग गर्ने परम्परा रहेको छ । एक महिला ओरोला भन्छिन जब उनि निकै सानी थिइन् त्यति नै बेला उनको पिताको मृत्यु भएको थियो तब उनको आमाले दोस्रो विवाह गरिन । त्यस समय देखि उनले दोस्रो पिता नै आफ्नो पतिको रुपमा देख्नु परेको थियो ।
साथै यदि कुनै महिलाको पतिको कम उमेरमा मृत्यु हुन्छ भने त्यस महिलाले आफ्नो पतिको परिवारको व्यक्तिसँग विवाह गर्नु पर्ने हुन्छ । ओरोलाको अहिले आफ्नो पिताको ३ बच्चा रहेको छ र आमाको भने २ बच्चा रहेको छ । भारत र बंगलादेशमा गरि मान्डी जनजातिको करिब २० लाख मानिसहरु बस्ने गर्दछन् । यस समुदायलाई मानिसहरु गारोको नामले पनि चिन्ने गर्दछन् ।
प्रकाशित : शुक्रबार, पुष १४, २०७४१३:५४
संसारको यस्तो एक ठाउँ जहाँ सेक्स गर्न पैसा लाग्दैन, यस्तो छ सर्त!
भर्खरै जन्मेको बच्चा हिंडेको देखेर डाक्टर पनि भए आश्चर्यचकित, भिडियो भाईरल
तपाईसँग भएको रुद्राक्ष सक्कली कि नक्कली ? यस्तो छ चिन्ने उपाय!
यसकारण यी व्यक्तिद्वारा फेसबुकमा लाइभ गरेर आफ्नै छोरीको हत्या,आफुले पनि गरे आत्महत्या…
सुरक्षाकर्मीले महिला फुटबल प्रशंसकलाई ‘ब्रा हेर्न सक्छौ’ भनेर प्रस्ताव गरेपछि…
चर्चित हिटलरलाई मार्ने मौका गुमाएका थिए यी अभिनेताले!